5 Pashure pezvinhu izvi pakava nomutambo+ wevaJudha, uye Jesu akakwira kuJerusarema. 2 Zvino muJerusarema pagedhi remakwai+ paiva nedziva rainzi Bhetizata nechiHebheru, raiva nemavharanda mashanu aiva nembiru. 3 Vanhu vazhinji vairwara, mapofu, vanokamhina nevaya vaiva nenhengo dzakakokonyara, vakanga varere pasi imomo. 4 —— 5 Asi mumwe murume akanga aripo akanga ave achirwara kwemakore makumi matatu nemasere. 6 Achiona murume uyu arere pasi, uye achiziva kuti akanga atove achirwara kwenguva refu,+ Jesu akati kwaari: “Unoda kuva noutano hwakanaka here?”+ 7 Murume wacho airwara akamupindura kuti: “Changamire, handina munhu wokuti andiise mudziva mvura painenge yabvongodzwa; asi pandinenge ndichiuya mumwe anonditangira kudzika.” 8 Jesu akati kwaari: “Simuka, tora kamubhedha kako ufambe.”+ 9 Naizvozvo murume wacho akabva ava noutano hwakanaka, uye akatora kamubhedha kake akatanga kufamba. Zvino zuva iroro rakanga riri sabata.+ 10 Naizvozvo vaJudha vakatanga kuti kumurume akanga arapwa: “Nhasi iSabata, uye hazvibvumirwi nomutemo+ kuti utakure kamubhedha.” 11 Asi iye akavapindura kuti: “Wacho aita kuti ndive noutano hwakanaka ndiye ati kwandiri, ‘Tora kamubhedha kako ufambe.’” 12 Ivo vakamubvunza kuti: “Ndiani munhu akuudza kuti, ‘Katore ufambe’?” 13 Asi murume akanga aporeswa haana kuziva kuti akanga ari ani, nokuti Jesu akanga abva, zvapaiva neboka revanhu ipapo. 14 Pashure pezvinhu izvi Jesu akamuwana ari mutemberi, akati kwaari: “Ona, wava noutano hwakanaka. Usatadzazve, kuti chimwe chinhu chakatoipa kwazvo chirege kuitika kwauri.” 15 Murume wacho akaenda, akaudza vaJudha kuti Jesu ndiye akanga aita kuti ave noutano hwakanaka. 16 Naizvozvo vaJudha vakatambudza+ Jesu nokuda kweizvi, nokuti akanga achiita zvinhu izvi paSabata. 17 Asi iye akavapindura kuti: “Baba vangu vave vachishanda kusvikira zvino, uye ini ndinoramba ndichishanda.”+ 18 Nokuda kweizvi, chokwadi, vaJudha vakatanga kutsvaka zvakatonyanya kumuuraya,+ nokuti akanga asingangoputsi Sabata chete asi akanga achitiwo Mwari ndiBaba vake,+ achizviita akaenzana+ naMwari. 19 Naizvozvo, achipindura, Jesu akaenderera mberi achiti kwavari: “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Mwanakomana haagoni kuita chinhu chimwe chete chaanozvitangira oga, asi chaanoona Baba vachiita chete.+ Nokuti chero zvinhu zvinoitwa naIyeye, Mwanakomana anoitawo zvinhu izvi saizvozvo. 20 Nokuti Baba vanoda Mwanakomana kwazvo+ uye vanomuratidza zvinhu zvose zvavanoita, uye vachamuratidza mabasa makuru pane aya, kuti mushamiswe.+ 21 Nokuti Baba zvavanomutsa vanhu vakafa nokuita kuti vave vapenyu,+ saizvozvowo Mwanakomana anoita kuti vaanoda vave vapenyu.+ 22 Nokuti Baba havambotongi munhu, asi vakapa Mwanakomana kutonga kwose,+ 23 kuti vose vakudze Mwanakomana+ sokukudza kwavanoita Baba. Asingakudzi Mwanakomana haakudziwo Baba vakamutuma.+ 24 Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Anonzwa shoko rangu akatenda iye akandituma, ane upenyu husingaperi,+ uye haatongwi asi apfuura achibva murufu achienda kuupenyu.+ 25 “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Awa iri kuuya, uye yatovapo, vakafa+ pavachanzwa inzwi+ roMwanakomana waMwari uye vanenge vateerera vachararama.+ 26 Nokuti Baba zvavaine upenyu mavari,+ saizvozvo vakapawo Mwanakomana kuti ave noupenyu maari.+ 27 Uye vakamupa simba rokutonga,+ nokuti iye ndiye Mwanakomana womunhu.+ 28 Musashamiswa neizvi, nokuti awa iri kuuya mairi vaya vose vari mumakuva vachayeukwa+ uye vachanzwa inzwi rake, 29 vobuda, vaya vakaita zvakanaka vachamukira upenyu,+ vaya vaiva netsika yokuita zvakaipa vachamukira kutongwa.+ 30 Handingaiti chinhu chimwe chete chandinozvitangira ndoga; ndinotonga, sezvandinonzwa; uye kutonga kwandinoita kwakarurama,+ nokuti handitsvaki zvandinoda ini, asi zvinodiwa+ naiye akandituma. 31 “Kana ini ndoga ndikazvipupurira,+ kupupura kwangu hakusi kwechokwadi.+ 32 Kune mumwe anondipupurira, uye ndinoziva kuti kundipupurira kwaanoita+ ndokwechokwadi. 33 Makatuma vanhu kuna Johani, uye akapupurira chokwadi.+ 34 Zvisinei, handigamuchiri uchapupu hunobva kumunhu, asi ndinotaura zvinhu izvi kuti muponeswe.+ 35 Munhu iyeye akanga ari rambi rinobvira nerinopenya, uye imi kwenguva pfupi maida kufara kwazvo muchiedza chake.+ 36 Asi ndine uchapupu hukuru kupfuura hwaJohani, nokuti mabasa chaiwo andakapiwa naBaba vangu kuti ndipedze, iwo mabasa chaiwo andiri kuita,+ anondipupurira kuti Baba vakandituma. 37 Uyewo, Baba vakandituma vakandipupurira.+ Hamuna kumbonzwa inzwi ravo chero panguva ipi zvayo kana kuona zvavakaita;+ 38 uye hamuna shoko rake rinoramba riri mamuri, nokuti hamutendi iye waakatuma. 39 “Munoongorora Magwaro,+ nokuti munofunga kuti muchava noupenyu husingaperi nawo; uye iwaya ndiwo chaiwo anondipupurira.+ 40 Asi hamudi kuuya kwandiri kuti muve noupenyu.+ 41 Handigamuchiri kukudzwa kunobva kuvanhu,+ 42 asi ndinonyatsoziva kuti kuda Mwari hakusi mamuri.+ 43 Ndakauya muzita raBaba vangu,+ asi hamundigamuchiri; kudai mumwe munhu aisvika muzita rake oga, maizogamuchira iyeye. 44 Mungagona sei kutenda, imi muchigamuchira kukudzwa+ kunobva kune mumwe nomumwe uye musiri kutsvaka kukudzwa kunobva kuna Mwari mumwe oga?+ 45 Musafunga kuti ndichakupai mhosva kuna Baba; kune mumwe anokupai mhosva, iye Mosesi,+ wamakaisa tariro yenyu maari. 46 Chokwadi, kudai maitenda Mosesi maizonditendawo, nokuti iyeye akanyora nezvangu.+ 47 Asi kana musingatendi zvakanyorwa naiyeye,+ muchatenda sei mashoko angu?”